करोडौँको जहाज उडाउने नेपाल एयरलायन्सका पाइलट बिजय लामालाई काठमाडौँमा ट्राफिकले के गर्यो यस्तो ? – Gazabkonews
करोडौँको जहाज उडाउने नेपाल एयरलायन्सका पाइलट बिजय लामालाई काठमाडौँमा ट्राफिकले के गर्यो यस्तो ?
करोडौँको जहाज उडाउने नेपाल एयरलायन्सका पाइलट बिजय लामालाई काठमाडौँमा ट्राफिकले के गर्यो यस्तो ? बिजयले खोले सारा रहस्यको राज, हेर्नुहोस् भिडियो
नेपाल लाइफ र शिखरले अग्रता कायम राख्दा सानिमा लाइफ र सानिमा जनरल आक्रमक बन्दै, कुन बीमा कम्पनी कस्तो ? जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको असारमसान्त सम्ममा एक खर्ब ५२ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा व्यवसायतर्फ
१ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ गरी सो बराबरको बीमाशुल्क संकलन भएको हो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का बाबजुद पनि बीमा कम्पनीहरुले उल्लेख्य बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका हुन । नेपालमा सञ्चालित १९ वटै जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमाशुल्क बढाएका छन् । २० निर्जीवन बीमा बीमा कम्पनी मध्ये २ बीमा कम्पनीको बीमाशुल्क भने घटेका छन् ।
नेपाल लाइफकाे अग्रता कायमै, व्यावसाय विस्तारमा नयाँ कम्पनीहरु आक्रमक बन्दै जीवन बीमा अन्तर्गत नेपाल लाइफले आफ्नो अग्रतालाई कायम राख्दै एक्लैले ३२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्जन गरेको कुल बीमाशुल्कको २७.१५ प्रतिशत हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारसम्ममा कम्पनीले २८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । नेपाल लाइफले कुल बीमाशुल्क आर्जनमा आफ्नो अग्रता कायमै राख्दा अधिकाँश नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने आक्रमक व्यावसाय विस्तार गरेका छन् । प्रयाजसो नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफनो व्यावसाय आक्रमक रुपले बढाएका छन् ।